Tag: paikady atiny | Martech Zone
Tag: paikadin'ny atiny
Tetika fananganana rohy tsy misy dikany izay miasa hahagaga tokoa
Alakamisy, Aprily 16, 2020 Alakamisy, Aprily 16, 2020 Oscar Florea
Ireo mpivarotra dizitaly dia miantehitra amin'ny fananganana rohy ho toy ny paikady tena ilaina amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana (SEO) hampitombo ny laharam-pejy ao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana (SERPs). Miaraka amin'ireo mpivarotra miasa mba hahazoana backlinks sy hanatsara ny fivezivezena amin'ny tranokala, hiteraka fitarihana, ary hahatratra tanjona hafa, dia nianatra nitodika tany amin'ireo fomba malaza maro ao amin'ny boatin-fitaovany izy ireo. Inona no atao hoe Backlink? Ny backlink dia rohy azo tsindriana avy amin'ny tranokala iray mankany amin'ny anao. Search engine toa
Ohatrinona ny orinasa manambola amin'ny paikady marketing amin'ny atiny?
Sabotsy, Janoary 9, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ity infographic avy any Tamba ity, ny Content Marketing Revolution, dia manana ny antontan'isa tsara indrindra ho an'ny orinasa B2B sy B2C hanamarinana ny fampitomboana ny ezak'izy ireo sy ny fandaniany ny paikady marketing atiny. Mahaliana tokoa, saika ny antsasaky ny serivisy fanoratana sy famolavolana dia omena ireo manam-pahaizana manokana momba ny atiny. Aza hadino ny mamaky ny lahatsoratray lalina momba ny atao hoe Content Marketing sy ny fomba fampivelarana tetikady marketing amin'ny atiny. Ary - mazava ho azy mifandraisa amin'ny atiny
Inona ny fepetra tokony horaisin'ireo mpivarotra hahombiazana amin'ny Internet
Alakamisy, May 21, 2015 Alahady Oktobra 4, 2015 Richard Hollis
Ny taonjato faha-21 dia nahita ny fisian'ny teknolojia marobe izay ahafahantsika mivarotra am-pahombiazana ireo orinasa amin'ny fomba mifangaro sy misy fiantraikany kokoa raha oharina amin'ny taloha. Manomboka amin'ny bilaogy, fivarotana ecommerce, tsena an-tserasera ka hatrany amin'ny fantsona media sosialy, ny tranonkala dia lasa sehatry ny fampahalalana ho an'ny daholobe ho karohin'ny mpanjifa sy hohaniny. Sambany, namorona fotoana vaovao ho an'ny orinasa ny Internet satria ny fitaovana niomerika dia nanampy tamin'ny famolavolana sy ny fanodinana azy
Ampidino ny varotra atinyo amin'ny famantarana ireo elanelam-potoana 6 ireo
Alarobia, Febroary 18, 2015 Douglas Karr
Faly aho nanao «webinar» omaly, tafiditra tao anatin'ny Vovonan'ny Virtual Marketing amin'ny atiny E-Training. Mbola afaka misoratra anarana maimaim-poana ianao, mijery ireo rakipeo ary misintona ireo boky sy fampisehoana. Ny lohahevitro manokana dia momba ny paikady iray niarahanay tamin'ny mpanjifanay nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay - ny famantarana ireo banga amin'ny paikadin'ny votoatin'izy ireo izay manampy azy ireo hanangana fahefana sy handroaka ny fiovam-po. Raha ny kalitaon'ny atiny no zava-dehibe indrindra amin'ny antsika
Ny State of Content Marketing 2014
Alarobia, Febroary 19, 2014 Alarobia, Febroary 19, 2014 Douglas Karr
Nanontany tena ve ianao hoe inona no vitan'ny mpivarotra nomerika hafa raha ny paikadim-barotra momba ny atiny, ao anatin'izany ny fitorahana bilaogy, ny famokarana, ny fizarana ary ny fandrefesana? Miaraka amin'ny LookBook HQ, Oracle Eloqua dia naneho ny fomba fandraisan'ny mpivarotra dizitaly ny fitakian'ny paikadim-pahefana amin'ity infographic ity. Izahay dia nitady hanamarina ny varotra atiny miaraka amin'ny fahitana manokana momba ny paikadin'ny haino aman-jery nahazo, tompony ary karama - inona ny politika arahin'ireo mpivarotra — ary koa ny fomba fanaovana an-tsarintany an-tsarintany mandritra ny dian'ny mpividy,